SW Radio Africa news - The Independent Voice of Zimbabwe Rights group says villagers flee violence in Shamva
Another disturbing report from Mashonaland Central was issued on Thursday, saying more MDC supporters have been forced to flee their homes by ZANU PF youths. The Restoration of Human Rights organisation (ROHR) says seven families have fled after being threatened by known ZANU PF supporters at a prayer meeting held at Zhanda village in the Chishapa area, Shamva.
This report came just a day after ROHR and the Crisis in Zimbabwe Coalition both issued statements on the arson attacks that took place in Muzarabani’s Charunda Village Ward 17, resulting in 55 people fleeing the area. The Crisis in Zimbabwe Coalition said ZANU PF burnt down an Apostolic Faith Mission (AFM) church and a house belonging to Wirimayi Gono, an MDC councillor, vowing to block attempts by MDC supporters to participate in the constitution making process. The pressure group went on to say that a meeting was convened in the same ward the next day, where the ZANU PF District chairperson for Muzarabani South, allegedly launched ‘Operation Hapana Anotaura’ (Operation no-one will speak) – a move to stifle MDC participation in the constitutional outreach programme starting on April 10th. Home  Archives  Schedule